ဘုရားသခင်၏ပြီးပြည့်စုံသောဒေါသ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီနေရာမှာငါဆာလံအပေါ်မကြာသေးမီကတရားကိုဟောတဲ့တရားဒေသနာင် 95:10-11. အကြှနျုပျ၏3မှတ်ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့ကြ:
II ကို. သိန်တစ်ဦး Alernate Path ကိုဖြစ်ပါတယ်
ရေဗက္ကာ Abbey Iiams • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာအတတ်၏အစအဦးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လူမိုက်သည်ပညာနှင့်စည်းကမ်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြု. သု. 1:7 — ဒါအများကြီးအားပေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
K.C. McElroy • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးအစ်ကို. သငျသညျအခွားသူမြားအားကြီးထွားကူညီအဖြစ်ခရစ်တော်ကြီးထွားလာ Keep. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
Derek လိန်း • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြဖွယ်သတင်းစကား. ကိုယ်တော်သင်အသုံးပြုစေ Continue!
ဧည့်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တပါးသောဘုရားအမျက်တော်သည်ခရစ်တော်၏အသွေးအားဖြင့်ပယ်ရှားကျွန်တော်တို့ကိုမှသိမ်းယူပြီဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ဆဲသောဘုရားကိုကွောကျရှံ့ထင်နေကြတယ် (သု 1:7) ဒါလျှင်အဘယျသို့ငါတို့သည်သူ့ကိုအကြောင်းကိုကွောကျရှံ့ထင်နေကြတယ်?
Jeremydaniel95 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Yanks7375 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်